महासचिव विष्णु पौडेल मन्त्री बन्दै | सुदुरपश्चिम खबर
काठमाडौं । सत्तारुढ दल नेकपा मन्त्रिमण्डल पुनर्गठनको तयारीमा जुटेपछि नयाँ बन्ने मन्त्री र फालिने मन्त्री को–को पर्लान् ? सबैको चासो अहिले यसमै छ ।
त्यसमा पनि अर्थमन्त्री को बन्लान् ? भन्ने चर्चा ब्यापक छ । प्रधानमन्त्री ओलीले सचिवालय सदस्य समेत रहेका अहिलेका दुई मन्त्रीहरु उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री इश्वर पोखरेल र गहमन्त्री समेत रहेका रामबहादुर थापा (बादल) लाई सरकारमा राखिरहन चाहेपछि उनीहरु पुनर्गठित मन्त्रिमण्डलमा डेन्जर जोनबाट सिधै सेभ जोनमा परेका छन् ।
सचिवालयमा रहेका महासचिव विष्णु पौडेल पनि सरकारमा सहभागी हुने भएका छन् । उनलाई प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारमा लान चाहेका छन् र उनको पूर्नगठन हुने मन्त्रीमण्डलमा इन्ट्री करिब निश्चित जस्तै भएको स्रोत बताउँछ ।
पूर्व प्रधानमन्त्री रहेका प्रचण्ड, माधव नेपाल र झलनाथ खनाल बाहेक त्यसपछि बाकी रहने अन्य दुई उपाध्यक्ष वामदेव गौतम र प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठका हकमा भने के होला ? यो पनि चासो छ । दुबैले सरकारमा सहभागी हुने इच्छा ब्यक्त गरेका छन् ।
ओलीले पोखरेललाई रक्षाबाट अन्यत्र सार्ने र राख्ने बादललाई गृहमै यथावत राख्ने तयारी गरेका छन् ।
महासचिव विष्णु पौडेल र स्थायी समिति सदस्य जर्नादन शर्माका बीचमा गृह र अर्थ दुई नेतामा आपसी सहमतिमा लिने गरी दुवै अध्यक्षलाई दबाब बढाउने रणनीतिमा लागेका देखिएका छन् । तर ओलीले गृहमा बादललाई नै राख्ने बताएपछि र आइतबार ओली र प्रचण्ड दुवैसँग थापाले आफु गृहमै रहने बताएपछि दुई नेताको योजनामा तगारो आईलागेको स्रोत बताउछ ।
यसो हुदा अर्थमा विष्णु पौडेल जाने सम्भावना बढेको छ भने जर्नादन शर्माको मन्त्रालय फिक्स हुन सकेको छैन् । पौडेल र शर्मा नेकपाभित्रको विवाद मिलाउन सूत्रधारका रुपमा भूमिका खेलेका नेता हुन् ।
झण्डै विभाजनको मुखमा पुगिसकेको नेकपाभित्रको घर झगडालाई यी दुई नेताले शंकर पोखरेलसँगको पनि साथ लिएर भित्री दौडधुप गर्ने र दुई अध्यक्षको वरिपरि रहेर विवाद मिलाउन भूमिका खेलका पात्र हुन् । यस अर्थमा शर्मा र पौडेल दुवैले सरकारमा महत्वपूर्ण मन्त्रालय लिएर जान चाहिरहेका छन् ।